तपाईको मास्क खोइ ? अभियानलाई तिब्रता
पाँचथर । पाँचथर जिल्लामा निशेधाज्ञा खुकुलो हुने भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले ” तपाइको मास्क खै”? अभियानलाइ तिब्रता दिएको छ। जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निशेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय सङै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तपाइको मास्क खै भन्ने अभियान थप सशक्त बनाएको हो ।
बैशाख २७ गतेबाट निशेधाज्ञा शुरु भएपनि जिल्ला प्रहरी कार्यलय पाँचथरले मास्क वितरण तथा सचेतना मुलक कार्यक्रम बैशाख १३ गतेबाट नै गरेको थियो । कोरोना संक्रमण बढ्न नदिनकालागि बजारका विभिन्न स्थानमा नागरिकलाइ सचेतना दिन तपाइको मास्क खै लेखिएको बोर्ड सहित प्रहरी पनि खटाइएको भएपनि साउन ३२ गते रातीदेखि निशेधाज्ञा खुकुलो हुने भएपछि यो अभियान लाई थप सशक्त बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक दान बहादुर थापाले जानकारी दिएका छन ।
शनि रे, शिवालय मन्दिर, बजारक्षेत्र लगाएतका फिदिमको चोकहरुमा तपाइको मास्क खै ? भन्दै मास्क नलगाउनेलाई मास्क समेत लगाइदिने गरिदिएका छन । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्रहरी चौकी मार्फत पनि यो अभियान कार्यन्वयन गरिएको थापाले बताए। प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यो अभियान गरिएको हो ।